Mots Croisés 1.0.75 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.75 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး Mots Croisés
Mots Croisés ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျခေတ်မမီတော့စကားများလုံလောက်စွာရှာဖွေရေး interfaces ရှိပါသလား
★★★ကိုသင်ယခု Crosswords ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Grid အပေါ်အခမဲ့ဆော့ကစားနိုငျပါသညျ! ★★★
Crosswords ဦးနှောက်စိန်ခေါ်မှုများအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလှုံ့ဆော်နိုင်သော crossword ဖန်တီးမှုတစ်ခုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပေါငျးတို့သမရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်များကိုလုံးဝစွဲလမ်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်စကားလုံးဂိမ်းများကိုအလျင်အမြန်စေလွှတ်ပါဝင်သည်။
➤ ဆန်းသစ်ထားတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန် : သင်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများနှင့်ပဟေဠိကိုကြိုက်လျှင်သင် UI ကိုသန့်ရှင်းလန်းဆန်းပထမဦးဆုံးမျက်မှောက် GRID မှာခစျြလိမျ့မညျ။
➤ ကစားရန်လက်တွေ့လွယ်ကူ: သင်အလွယ်တကူတိကျတဲ့စကားလုံးက hidden ဖွဲ့စည်းရန်စာလုံးဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်ရန်ကစားရန်လွယ်ကူပြီးပျော်စရာပါပဲ။
➤ အပိုဆုအံ့သြစရာ : နေ့တိုင်း log နှင့်နေ့စဉ်ဆုကြေးငွေလက်ခံရရှိသည်။ သငျသညျကိုလညျး crossword ပဟေဠိအပေါ်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်သောဖြည့်စွက်စကားရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
➤2000 CONTACTPlus စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စိန်ခေါ်မှုများ : ကပထမဦးဆုံးမှာလွယ်ကူပေမယ့်အလျင်အမြန်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ ထိုအသင်သည်သင်၏ဝေါဟာရ၏ကန့်သတ်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ နယူးအဆင့်ဆင့်လမ်းကိုအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
➤ စကားလုံးဂိမ်းစွဲလမ်း 100% : သင်ပျင်းခံရဘယ်တော့မှမည်! ဒီ crossword ပဟေဠိတစ်ချိန်က Play နှင့်သင်ကြွင်းသောအရာရောက်ရှိရန်မည်!
- ထိုစကားလုံးအမိန့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ "ရောနှောနေခြင်း" ကိုခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ
- အရရန် "Indicator" ၏ခလုတ်ကိုထိ
•သင်ကင်များအတွက်တစ်ဦးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သာယာသော (စိတ်ကြိုက် themes များကဘာလဲဆိုတာအဘို့အညှိနေပါ)
သင်တို့အဘို့• level 2000+ ဂိမ်း
•ရိုးရှင်းသောဂိမ်း & လွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမယ့်ခက်ရိုက်နှက်ရန်
သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကငျြ့စတင် Grid အပေါ်စကားလုံးဂိမ်းစစ်မှန်သောမာစတာဖြစ်လာမှယခု DOWNLOAD!
Mots Croisés အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Mots Croisés အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Mots Croisés အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Mots Croisés အား အခ်က္ျပပါ
masteredshop စတိုး0333
Mots Croisés ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Mots Croisés အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.75
ထုတ်လုပ်သူ WePlay Word Games
App Name: Mots Croisés
Release date: 2019-07-12 23:32:26
Mots Croisés APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ